Interview – Bachan Tv
आज काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, कमलादीमा उपत्यकाव्यापी संयुक्त ख्रीष्टजन्मोत्सव तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
सो कार्यक्रममा विभिन्न पाष्टरहरु र नेताहरुले ख्रीष्टमसको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
नेता महेश बस्नेतले ख्रीष्टियनहरुको समस्या नजिकबाट हेरेको, यसको लागि पहल पनि गरिरहेको बताउनु भयो ।
अर्का नेता न्युछे नारायण श्रेष्ठले नेपाली काँग्रेसमा जुन हिन्दू धर्मको कुरा आएको छ तर हिन्दू राज्य नहुने बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेसका ४ तारामा १ तारा धार्मिक स्वतन्त्रता भएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
पाष्टरहरु उल्लेखनिय उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा सर्वसाधारण भने न्युन रहेको थियो । आयोजकले केही कमिले गर्दा यस्तो हुन पुगेको समेत कार्यक्रममा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सो कार्यक्रममा कसकसले के के बोल्नु भयो सो हेर्नुहोस्
Posted on May 3, 2018 May 3, 2018 by BACHAN TV
बिहीबार, मे ३, वैशाख २०
‘परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो ।’ —१ इतिहास ४ः१०
याबेसले ‘ठूलो इलाका मलाई दिनुहोस्’ भन्ने प्रार्थना गर्दा, उनले भन्दैथिए, ‘प्रभु, म आपूmसँग भएको भन्दा धेरै चाहन्छु, र म तपाईंसँग त्यो माग्छु !’ यी मानिससँग ठूलो लक्ष्य थियो, र परमेश्वरले तिनलाई आशिष् दिनुभयो । यहाँ तीनवटा साधारण गलत बुझाइ छन् जसले हामीलाई ठूलो लक्ष्य लिनबाट रोक्न सक्छन्ः १) हामी डरलाई नम्रता भनी गलत रूपमा लिन्छौँ । ‘अँह, म यो कहिल्यै गर्न सक्दिनँ’ भन्नुचाहिँ नम्रता हो भनी हामीले सोचिरहेकाछाँै होला । तर त्योचाहिँ न्रमता होइन; त्यो त डर हो । यस्तो प्रकारको डरचाहिँ विश्वासको कमी हो । साँचो नम्र व्यक्तिले चाहिँ यसो भन्छ, ‘परमेश्वरको सहायताले म त्यो गर्नसक्छु । परमेश्वरको आशिष्को कारण म गर्न सक्छु । सायद म आफँैले यो गर्नसक्दिनँ, तर परमेश्वरको सहायताले म यो गर्न सक्छु ।’ त्योचाहिँ वास्तविक नम्रता हो । २) हामी अल्छीपनलाई सन्तुष्टिको रूपमा लिने भ्रममा पर्छौं । हामी पावलको भनाइ उद्धरण गर्छौंः ‘जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु’ (फिलिप्पी ४ः११) । यसको अर्थचाहिँ तपाईंले योजनाहरू बनाउनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन । पावलले ‘मसँग कुनै योजना छैन वा भविष्यको निम्ति कुनै पनि योजना छैन’ भनेका होइनन् । वास्तवमा बरु त्यसको विपरीत कुरा गरेका हुन् । उनले ‘पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै’ (फिलिप्पी ३ः१३) भन्ने कुरा गरेका छन् । यदि तपाईंसँग दर्शन छैन भने वा उद्देश्य छैन भने परमेश्वरसँग माग्नुहोस् । ३) हामी सानो सोचाइलाई आत्मिकताको रूपमा लिने भ्रममा छौँ । केही मानिसले भन्छन्, ‘म आफ्नै सानो तरिकाले परमेश्वरको सेवा गर्छु ।’ किन तपाईं बृहत् रूपमा परमेश्वरको सेवा गर्न सुरु गर्नुहुन्न ? किन आपूmलाई धेरै प्रयोग गर्न उहाँलाई अनुमति दिनुहुन्न ? अरू कतिपयले भन्छन्, ‘अँ, म जस्तो छु यतिमै म ठिक छु । त्यो तरिकाले नै परमेश्वरले मलाई बनाउनुभएको छ ।’ आपूmलाई वृद्धि गर्न नसक्दा परमेश्वरलाई आरोप लगाउनु गलत हो किनकि उहाँले तपाईंलाई वृद्धि गराउनको निम्ति आवश्यक सबै सामाग्री र उपायहरू जुटाउनुभएको छ । सत्यताचाहिँः ठूलो सोच राख्नुहोस्, नत्र तपाईंले परमेश्वरलाई बाधा दिनुहुनेछ !
आत्मिक भोजन ः व्यवस्था ३–४,मर्कूस ६ः७–१३, भजन २, हितोपदेश ११ः२२–२३
बिहीबार, मे ३, वैशाख २०‘परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो ।’ —१ इतिहास ४ः१०याबेसले ‘ठूलो इलाका मलाई दिनुहोस्’ भन्ने प्रार्थना गर्दा, उनले भन्दैथिए, ‘प्रभु, म आपूmसँग भएको भन्दा धेरै चाहन्छु, र म तपाईंसँग त्यो माग्छु !’ यी मानिससँग ठूलो लक्ष्य थियो, र परमेश्वरले तिनलाई आशिष् दिनुभयो । यहाँ तीनवटा साधारण गलत बुझाइ छन् जसले हामीलाई ठूलो लक्ष्य लिनबाट रोक्न सक्छन्ः १) हामी डरलाई नम्रता भनी गलत रूपमा लिन्छौँ । ‘अँह, म यो कहिल्यै गर्न सक्दिनँ’ भन्नुचाहिँ नम्रता हो भनी हामीले सोचिरहेकाछाँै होला । तर त्योचाहिँ न्रमता होइन; त्यो त डर हो । यस्तो प्रकारको डरचाहिँ विश्वासको कमी हो । साँचो नम्र व्यक्तिले चाहिँ यसो भन्छ, ‘परमेश्वरको सहायताले म त्यो गर्नसक्छु । परमेश्वरको आशिष्को कारण म गर्न सक्छु । सायद म आफँैले यो गर्नसक्दिनँ, तर परमेश्वरको सहायताले म यो गर्न सक्छु ।’ त्योचाहिँ वास्तविक नम्रता हो । २) हामी अल्छीपनलाई सन्तुष्टिको रूपमा लिने भ्रममा पर्छौं । हामी पावलको भनाइ उद्धरण गर्छौंः ‘जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु’ (फिलिप्पी ४ः११) । यसको अर्थचाहिँ तपाईंले योजनाहरू बनाउनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन । पावलले ‘मसँग कुनै योजना छैन वा भविष्यको निम्ति कुनै पनि योजना छैन’ भनेका होइनन् । वास्तवमा बरु त्यसको विपरीत कुरा गरेका हुन् । उनले ‘पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै’ (फिलिप्पी ३ः१३) भन्ने कुरा गरेका छन् । यदि तपाईंसँग दर्शन छैन भने वा उद्देश्य छैन भने परमेश्वरसँग माग्नुहोस् । ३) हामी सानो सोचाइलाई आत्मिकताको रूपमा लिने भ्रममा छौँ । केही मानिसले भन्छन्, ‘म आफ्नै सानो तरिकाले परमेश्वरको सेवा गर्छु ।’ किन तपाईं बृहत् रूपमा परमेश्वरको सेवा गर्न सुरु गर्नुहुन्न ? किन आपूmलाई धेरै प्रयोग गर्न उहाँलाई अनुमति दिनुहुन्न ? अरू कतिपयले भन्छन्, ‘अँ, म जस्तो छु यतिमै म ठिक छु । त्यो तरिकाले नै परमेश्वरले मलाई बनाउनुभएको छ ।’ आपूmलाई वृद्धि गर्न नसक्दा परमेश्वरलाई आरोप लगाउनु गलत हो किनकि उहाँले तपाईंलाई वृद्धि गराउनको निम्ति आवश्यक सबै सामाग्री र उपायहरू जुटाउनुभएको छ । सत्यताचाहिँः ठूलो सोच राख्नुहोस्, नत्र तपाईंले परमेश्वरलाई बाधा दिनुहुनेछ ! आत्मिक भोजन ः व्यवस्था ३–४,मर्कूस ६ः७–१३, भजन २, हितोपदेश ११ः२२–२३
Posted on April 24, 2018 April 24, 2018 by BACHAN TV
Posted on April 23, 2018 April 23, 2018 by BACHAN TV
Posted on February 21, 2018 February 21, 2018 by BACHAN TV
अझै पनि नेपालबाट भारतको मुम्बई लगायत बिभिन्न तेश्रो मुलुकमा नेपाली चेलिबेटी बेचबिखन हुने घटनाक्रम रोकिएको छैन । चेलीबेटी बेचबिखन नेपालका लागि विकराल समस्या र कहिल्यै नमेटिने कलङ्क बनेको छ । बेचविखनको पुरानो बाटोबाट नभइ अहिले दलालहरुले विभिन्न कामको बाहानामा खाडी मुलुकलगाएत देश लैजाने भन्दै नेपाली चेलीहरुलाई भारतलगाएतका मुलुकहरुमा ललाई फकाई बेचविखन गरिरहेका छन् । यसरी दिनानुदिन चेलिबेटी बेचबिखनको क्रम बढ्दै जानुले नेपाल र नेपालीको स्वाभीमान मानै दख्खल पुर्यायको छ । यस्ता अपराध गर्नेको बिग बिगी सर्बत्रै भएको पाईएता पनि रोकथमका लागि गरिएको झिनो प्रयास सफल हुन सकेको छैन । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र महिलामाथि हुने भेदभाव घटाउनु र बेचबिखन निर्मुल पार्नु सहज भने छैन । दलालको पञ्जाबाट चेलीहरुलाई बचाउन र समस्यालाई पूर्ण रुपमा निर्मुल पार्ने संकल्प गर्ने हो भने त्यो असम्भव पनि छैन । वास्तममा अपराध नियन्त्रण तथा महिला र बालिका लक्षित आर्थिक सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गरिने हो भने चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या हल हुन्छ । रोकथामको प्रयास त सरकारी,गैर सरकारी तथा बिभीन्न समुदायबाट पनि हुँदै आएको छ । अब यसलाई थप सशक्त रूपमा एउटा राष्ट्रकै महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाएर समुदाय संघ संस्थालाई समेटी देशव्यापी अभियान चलाउनु जरुरी भइसकेको छ । साथै बेचबिखन सम्बन्धि कानुनमा कडाई ल्याउनुका साथै बेचिएकारूको उद्धार र पुर्नस्थापनाका लागि विशेष किसीमको निती नियमको आवश्यक छ । जसको फलस्वरूप हजारौं चेलीे उद्वार हुनु साथै नेपाली भुमीमै नयाँ जीवनको सास लिई स्वतन्त्र भई जिउन पाउने छन् भने हजारौं बेचबिखनको सिकार भई नारकीय जीवन बिताउनु पर्ने मृत्युरूपी जेलमा पुग्नबाट बच्ने थिए ।